ऋतिकले खुलाए,३० हजार युवतीको विवाह प्रस्ताव – News Nepali Dainik
समीक्षाले फोटो, भिडियो सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिएपछि हच्चिए पल, विवाहको लिखित सहमति भएको खुलासा
हे – दैव # Rip😭यी नै हुन् सुदुर की चेली देबु कुमारी , जसको भारत मा पहाड बाट खसेर दुखद निधन
भखरै सुर्खेतमा ब’म वि’स्फोट, दिदीभाइ घाइते, कस्तो छ अहिले त्यहाँ को अवस्था ?
दशैं मनाउँन गएका श्रीमानको शव खोलामा भेटियो, रुदारुदै बेहोस भएर श्रीमतिको मृत्यु
सेतीमा हा’म फा’लेर १९ वर्षकी किशोरी बे’पत्ता !
ऋतिकले खुलाए,३० हजार युवतीको विवाह प्रस्ताव
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १७, २०७७ समय: १२:२२:४४
बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशनले सन् २००० मा फिल्म ‘कहो ना प्यार हे’ बाट अभिनयमा ‘डेब्यू’ गरे ।
पहिलो फिल्मले नै उनलाई रातारात स्टार बनाइदियो । यो फिल्म रिलिज पछि ऋतिक यति लोकप्रिय भए कि उनलाई झन्डै तीस हजार युवतीले विवाहको प्रस्ताव पठाए । हालैको एक अन्तरवार्तामा ऋतिकले यो कुराको खुलासा गरेका हुन् ।
‘पहिलो फिल्म नै हिट भएपछि झन्डै ३० हजार युवतीले विवाहको प्रस्ताव पठाए’ उनले भनेका छन्, ‘यो घटनापछि मलाई मनपराउने मान्छे कति रहेछन् भन्ने थाहा भयो । घरमा बुवा राकेश रोशन पनि छक्क पर्नुभयो ।’ फिल्म ‘कहो ना प्यार हे’बाट अभिनेत्री अमिषा पटेलले ऋतिकसँगै बलिउडमा ‘डेब्यू’ गरेकी थिइन् । यो फिल्मका सबै गीत हिट साबित भइसकेका छन् ।
कामको कुरा गर्दा ऋतिक पहिलोपटक अभिनेत्री दीपिका पादुकोणसँग अनस्क्रिन रोमान्स गर्दैछन् । सिद्धार्थ आनन्दले निर्देशन गर्ने फिल्मको नाम ‘फाइटर’ राखिएको छ । फिल्ममा ऋतिक पाइलटको भूमिकामा देखिदैछन् । यो फिल्म हलिउड अभिनेता टम क्रुजको फिल्म ‘टप गन’बाट प्रभावित रहेको जनाइएको छ ।
ऋतिक अभिनेत्री दीपिकासँग रोशन मधु मन्टेनाको फिल्म ‘रामायण’मा देखिँदैछन् । फिल्ममा ऋतिक राम र दीपिका सीताको चरित्रमा देखिनेछन् ।
Last Updated on: January 30th, 2021 at 12:23 pm
२०४ पटक हेरिएको
हिट गीत ‘कालो केशमा रेलिमई’ की यति राम्री ‘चियावाली’ मिडियामा । हिरोईन बन्ने मन, प्रेम प्रस्तावको ओईरो (भिडियो हेर्नुस)
बाँचे आउला फर्केर,म रे भने छोरीलाई बचाइदिनु भन्दै रु ए बिनिताका बुबा,के भयो फेरि यस्तो कठै (भिडियो हेर्नुस्)
कोरिया का’ण्ड: श्रीमानले भिजा पठाएकै दिन श्रीमति अन्तै हिँडीन, सोझा श्रीमान नेपाल फर्के (भिडियोसहित)
‘अमेरिकीन बच्चा’ जन्मिएपछी परिवारलाई लाग्यो शंका, सत्य थाहा पाउदा उडायो होश !